Hawlihii caafimad ee dhakaatiirta ajaaniibta ah oo ka socda Garowe; dawladda oo kordhisay waqtiga joogitaanka dhakhaatiirta. – Radio Daljir
Garowe, Oct 06 – Howlahaan qalliinada ah oo ay fulinayaan dhaqaatiir ka socota waddamada Ingiriiska iyo Kenya ayaa waxaa ay ka socdaan isbitaalka guud ee Garoowe halkaasi oo ay ku suganyihiin boqolaal ruux oo ka faa?idaysanaysa adeegga caafimaad, kuwaasi oo ka kala yimid qaybo kamid ah gobollada Soomaaliya sida ay Daljir u xaqiiyeen qaar kamid ah dadka bukaanka ahi.
Ku-xigeenka Agaasimaha guud ee isbitaalka Garowe Dr Cismaan Xaaji Yuusuf, oo aan ku waraysannay maanta isbitaalka guddihiisa ayaa xog-waran dheer ka bixiyay xaaladda isbitaalka oo ay weli kasocdaan qalliimada loo fulinayo dadka faruuran.
Agaasimaha, wuxuu sheegay in hawlaha qallitaanku ay si wanaagsan u socdaan, islamarkaana dhaqaatiirtu ay qaabileen in ku dhow illaa 200 oo qof, kuwaasi oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn, waxaana dadka laga diiwaan-galiyay magalaada Garowe oo kaliya ay gaarayaan illaa 600 oo ruux.
Agaasimuhu, waxaa kale uu sheegay in dawladda Puntland ay kordhisay waqtigii joogitaan ee dhaqaatiirta, kaddib markii la arkay baahida loo qabo adeegyada caafimaad ee ay ku hawllan yihiin iyo caddadka dad ka faa?idaysanaya.
Dhinaca kale qaar kamid ah waaldiinta ubadkooda oo faruurnaa loo sameeyey qalliimada ayaa Daljir u sheegay in ay si wanaagsan uga faa?idaysteen qalliimadaan ay fulinayaan dhaqaatiirta u dhalatay dalalka Ingiriiska iyo Kenya, waxayna ay mahad-ballaaran u soo jeediyeen dhakaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka Puntland.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdi Raxmaan Sheikh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa 4-tii bishaan booqasho ku tagay isbitaalka guud ee Garowe halkaasi oo ay ka socdeen adeegyada caafimaad ee loo fulinayey dadka faruuran, waxaana madaxwenuhu dhakhaatiira uga bogaadiyey hawla cusub ee ay u ahayaan bulshada reer Puntland.
C/ Weli Maxamed Shiekh